Xasaasi, Siciid Yamani iyo Macallin Cabdi Joon oo abaal-marinno ka helay tartankii dhowaan la soo xiray ee General Daa’uud… + SAWIRRO – Gool FM
Xasaasi, Siciid Yamani iyo Macallin Cabdi Joon oo abaal-marinno ka helay tartankii dhowaan la soo xiray ee General Daa’uud… + SAWIRRO
Haaruun November 23, 2019
(Muqdisho) 23 Nof 2019. Koobka General Daa’uud ayaa todobaadkii la soo dhaafay lagu soo gabagabeeyay Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, iyadoo ay koobka ku guuleysatay kooxda Horseed kaddib markii ay 3-2 ugu badisay naadiga Muqdisho City Club.
Kooxda Horseed ayaa markii lixaad ku guuleysatay dhacdada xiisaha badan ee Koobka General Daa’uud, iyadoo ay ugu dambeysay sanadkii 2015-kii.
Haddaba markii ay soo dhammaatay ciyaartii final-ka ee dhaxmartay kooxaha Horseed iyo Muqdisho City Club waxaa garoonka dhaxdiisa lagu bixiyay abaal-marino kala duwa kuwaas oo la siiyay shaqsiyaadkii waxqabadka muuqda soo bandhigay inta uu socday Tartanka General Daa’uud.
Abaal-marinta la bixiyay waxaa la siiyay xiddigaha kala ah Xasaasi, Saciid Yamani iyo Macallin Cabdi Joon oo isna ku guuleystay macalinka ugu fiican tartanka.
Saciid Yamani ayaa ku guuleystay Goolhayihii ugu fiican tartanka General Daa’uud kaddib markii uu ka saaciday kooxdiisa Moqdisho City Club inay sanadkii labaad oo xiriir ah ay gaarto final-ka Koobka General Daa’uud.
Goolhaye Saciid Yamani ayaa ka mid ah goolhayeyaasha ugu fiican ee dalkeenna, isagoo bandhig cajiib ah ka sameyay isreeb-reebkii Koobka Adduunka ee uu xulkeenna qaranka la dheelay dalka Zimbabwe.
Saciid Yamani ayaa kooxda Muqdisho City Club wuxuu uga soo biiray naadiga difaacanaysa horyaalka ee Dekedda FC.
Xiddigii ugu fiicnaa koobka General Daa’uud sanadkan waxaa ku guuleystay laacibka khadka dhexe ee Xasan Cabdi Nuur Geesey (Xasaasi), kaas oo bandhig il-qabad leh ku soo bandhigay kulammadii uu u ciyaarayay kooxdiisa Horseed.
Xasaasi ayaa intii uu socday tartanka General Daa’uud wuxuu dhaliyay 6-gool isagoo saftay tiro 5 kulan ah, taas oo kuu muujinaysa inuu yahay xiddiga ugu wanaagsan tartanka, sidoo kalena waa xiddiga kaliya dhexda ka dheela ee dhaliyay shan gool, wuxuu ka goolal badan yahay qaar ka mid ah Weeraryahannada kooxaha kale.
Tababare Cabdi Wali Maxamed Maxamuud (Cabdi Joon) ayaa la guddoonsiiyay abaal-marinta macallinka ugu fiican tartanka General Daa’uud sanadkan 2019.
Cabdi Joon ayaa saddex jeer oo xiriir ah gaaray final-ka Koobka General Daa’uud isagoo mar u qaaday Kooxda Elman si lamid ah Kooxda Horseed uu iminka hoggaamiyo gacanta u galiyay Koobkan oo muddo ugu dambeysay, halka marka kalena laga qaaday Tababare Cabdi Joon koobkan.
Hoggaamiye Cabdi Joon ayaan dhulka la dhigin dhammaan kulammadii uu ka ciyaaray Koobka General Daa’uud sanadkan isagoo kaliya labo kulan barbaro galay, inta kalena uu adkaaday.
Shaxda rasmiga ah kulanka Leganes vs Barcelona oo la shaaciyey…. (Yaa safka hore ee Barca ku wehliya Lionel Messi?)